မယ့်ကိုး: ရုပ်ဆိုးသူဟာ လှောင်စရာ
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 4/27/2013 10:59:00 AM
ငယ်တုန်းက အဲလိုခံစားမှုမျိုးရှိခဲ့ဖူးတယ်...ကိုယ်တော့မဟုတ်ဘူး ခြေတဖက်မသန်တဲ့ကိုယ့်မောင်လေးကို အနိုင်ကျင့်ကြတာလေ...
27/4/13 1:32 PM
မိဘတွေက ကလေးကို စိတ်ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်အောင်သင်ကြား ထားသင့်ခဲ့တာ ၊ကျနော်ဆို အငယ်က ဘယ်သူက ဘယ်လိုပြောင်ပေမယ့် ခပ်သာသာပဲ .. မခံနိုင်လွန်းရင် လုပ်ထဲ့ပစ်လိုက်တယ် ဟီး
27/4/13 3:27 PM
ကျွန်မကို ချစ်ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူနေရမယ်ဆိုရင် ခြားနားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မလား။ ဘယ်သူတွေက ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်နေပါစေ ။ သူငယ်ချင်းတွေက ဘေးမှာရပ်တည်ပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ထိခိုက်လွယ်သူဖြစ်မလာဘဲ လောကဓံကို အရေထူလာလေမလား။.......<<<တခါတရံကျတော့လည်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းက အရေးပါတဲ့အခန်းကပါနေတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပစ်ပယ်မှုကြောင့် သိမ်ငယ်သွားတဲ့လူတွေရှိသလို...ဘာမှမဟုတ်ဘဲလည်းဂရုတစိုက်တသသမို့...ယုံကြည်မှုတိုးလာသူတွေလည်းရှိတယ်။ အက်ဆေးကောင်းလေးပါ....
27/4/13 4:37 PM
တစ်ဘက်သား အားနည်းချက်ကို သရော်တတ်သူ၊ နှိမ့်ချတတ်သူတွေဟာ သူတို့တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပြည့်စုံနေပါစေ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ စိတ်ဓာတ်အရာမှာ နိမ့်ပါးသူတွေပါ။ သူများရဲ့ကြေကွဲမှု၊ သူများရဲ့ အားနည်းချက်၊ သူများရဲ့သောကတွေက သူတို့အတွက် ဟာသမြောက်နေတာကိုက သူတို့ကိုယ်တိုင် ဟာသလုံးလုံး ဖြစ်နေရတာကို မသိလို့ပါ။ အဲ့တာကို စာနာစိတ်နဲ့ တည့်မတ်ပေးရမယ့်အစား ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ၀ိုင်းဘေးတီးလှုံ့ဆော်ပေးနေကြသူများကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ တစ်တန်းစားထဲ ထည့်ဖြစ်မိပါတယ်။ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားတောင် မရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့တာ မယ့်လည်း သိပါတယ်။ မ..တို့တွေက ပုထုဇဉ် လူသားတွေပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ရင်ဆိုင်၊ မရရင် ရှောင်လွှဲ၊ မရရင် ဥပေက္ခာသာ ပြုထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်က ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် ရှေ့ဆက်ရမှာတွေ အများကြီးကျန်သေးတော့ ဘာမဟုတ်တာတွေကို စိတ်ထဲ ထည့်သိုထားမနေတာ အကောင်းဆုံးလို့ မြင်မိပါတယ်..။
27/4/13 4:44 PM
အပေါ်က မမမြသွေးနီ ပြောသလိုပဲပေါ့ ညီမလေးရယ်
မ..တို့တွေက ပုထုဇဉ် လူသားတွေပါ။ တတ်နိုင်သမျှ ရင်ဆိုင်၊ မရရင် ရှောင်လွှဲ၊ မရရင် ဥပေက္ခာသာ ပြုထားလိုက်ပါ။ ကိုယ်တိုင်က ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် ရှေ့ဆက်ရမှာတွေ အများကြီးကျန်သေးတော့ ဘာမဟုတ်တာတွေကို စိတ်ထဲ ထည့်သိုထားမနေတာ အကောင်းဆုံးလို့ မြင်မိပါတယ်..။
Khaing Nwe said...
FB မှာမယ်ပျောက်နေတာ သတိထားမိတာကြာပြီ... မယ့် blog မှာလည်းအသစ်မတွေ့တာ တော်တော်လေးကြာပြီ.. ခုပြန်တွေ့တော့ဝမ်းသာတယ်... ဒါပေမဲ့ ဖတ်မိတဲ့ post လေးအတွက်တော့ တော်တော်ခံစားရတယ်
28/4/13 6:19 PM
“ ရှုမငြီးကြည်သာ ” လို ကလေးဘ၀က အနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေအတွက် ကျောင်းဝန်းကျင်
မှာ ပြင်ဆင်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါ ။ အဲဒီ ကျောင်းဝန်းကျင်ကြီးက လျစ်လျှုရှုထားတတ်တာကိုလည်း နိုင်ငံတော်က ကြည့်မနေဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း ...
30/4/13 6:05 PM
လူတယောက်ရဲ့ အမည်နာမဆိုတာ ဘ၀ကို တစိတ်တပိုင်း လွှမ်းမိုးတယ် ဆိုပေမဲ့ လူသာလျှင် အဓိက မဟုတ်ဖူးလား မယ်...
I FEEL SO SAD READING YOUR POST.
LAST TIME I ALSO ENCOUNTERED A LOT OF PROBLEMS LIKE U BUT NOW I DON'T CARE ABOUT HOW THE OTHER PEOPLE THINK OF ME
FEEL TOO MUCH, THINK TOO MUCH IS NOT GOOD FOR HEALTH
3/5/13 12:36 PM
အမရေ... အများဆုံးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ခံစားချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ ပေါက်ကွဲရေးသားထားတာဖတ်ရတော့ တမျိုးခံစားရပါတယ်။ လိပ်လိုပဲ အရေခွံမာလာ၊ စမ်းသပ်စရာ သက်ရှိပစ်ကွင်း၊ မီးပွင့်ငယ်ထိရုံမျှနဲ့လည်း မိုးလုံးညံအောင် ပေါက်ကွဲချင်တယ်...တဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ သိပ်ပြောင်မြောက်လွန်းတယ်။
3/5/13 7:45 PM
ယမင်းရုပ်လေးလို လှစေချင်လို တဲ့ ...
အလှောင်မခံနိုင်လို. ယဉ်မင်းလို. ရအောင်ပြောင်း ခဲ့တယ်...
My name is Yin Min လို. လူတကာကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ပြီး ပြောကျင့်ခဲ့တယ်...
သူများလှောင်လို. စိတ်နာ၇သမျှ အဲဒီလူတွေထက် အဆတရာလောက် သာအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်….
၇ီတော့ ၇ီစ၇ာ ဟားဟား
အင်း..တို့က မောင်နှမသုံးယောက်ထဲမှာ အလယ်မှာ ပါတဲ့ တဦးတည်းသော မိန်းကလေး။ အကိုနဲ့ မောင်နဲ့က မေမေနဲ့ တူတော့ ဖြူတယ် ချောကြတယ်။ တို့က ဆံပင်ကောက်ကောက်ပွပွနဲ့ ငယ်ငယ်ကဆို ဆော့ဖို့လောက်ပဲ အားသန်တဲ့ ကောင်မလေး.. ဆိုတော့ မောင်နှမ သုံးယောက် ပွဲထုတ်ရင် သမီးမိန်းကလေးက အဖေနဲ့ တူတယ်လို့ မှတ်ချက်အပေးခံရဆုံးပေါ့။ ဆိုလိုတာက မေမေ့လို မလှဘူးပေါ့...ဟဲဟဲ..ဒါတွေကို ကိုယ်လက်မခံဘူး။။ သူတို့ပြောချင်တာ ပြောပါစေလေ... ကိုယ့်မိဘတွေက ကိုယ့်ကို နှစ်သိမ့်ကြတာကိုး။ အဖေတူသမီးက ကြီးပွားမှာ...တဲ့။ အဆိုးဆုံးက ကလေးအချင်းချင်း နောက်တာ.... တို့က ဆံပင်ကောက်တော့ "ဆံပင်ကောက်ကောက် လင်ခြောက်ယောက်" လို့ ကိုယ်ဖြတ်သွားရင် အော်ကြတယ်။ တို့က အလယ်တန်းကျောင်းတက်တဲ့ အချိန်မှာ..တခြား ကျောင်းက လူဆိုးကျောင်းသားကြီးပေါ့...တနေ့တော့ တို့လည်း တအားဒေါသထွက်ပြီး လွယ်အိတ်ပစ်ချပြီး အဲဒီချာတိတ်ကို အပေါ်က တက်ဖိပြီး ဆွဲထိုးလိုက်တာ...သူ့နှုတ်ခမ်းပေါက်သွားတော့မှ ကိုယ် အသိပြန်ဝင်လာတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း တို့ကို ဘယ်သူမှ အဲလို အော်သံ မကြားရတော့ဘူး။ ကျောင်းချင်းမတူတာရယ်၊ ကျောင်းဆင်းချိန်ရောက်နေတာရယ်ကြောင့် ဆရာမတွေ မသိလိုက်ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ခု ကိုယ့်ကလေးတွေ ခေတ်မှာလည်း ဒါမျိုးတွေ ရှိနေဆဲပဲ။ သူတို့ကို ပြောထားတာက သူများတွေ ကျဉ်ထားတဲ့ သူတွေကို စာနာဖို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားဖို့၊ အားနည်းတဲ့သူကို မနောက်ပြောင်မိစေဖို့...။ ကိုယ်ခံစားရတာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီး သင်ခန်းစာယူဖို့ပဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အမှားတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းနေရင်တော့ အမှားတွေပဲ ထပ်နေမှာပဲလို့ လက်ခံတယ် မယ့်ရေ... မောထှာ.. :)
26/9/13 11:17 AM
Linn way said...
အလှတရားတွေအားလုံးထဲမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာသည် စိတ်ထားလှခြင်း ..............
26/9/13 10:21 PM